अस्पतालको वेडबाटै अमिताभ बच्चनले जारी गरे यस्तो भिडियो सन्देश - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि मुम्बईस्थित नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् ।
उनले जारी गरेको भिडियो डाक्टर तथा नर्सहरुको सेवाप्रति नतमस्तक रहेको बताएका छन् । उनले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘हालै मैले ट्वीटरमा एक पोस्ट हेरेको थिएँ । त्यहाँ सुरतको एक बिलबोर्डको तस्बिर थियो, जसमा लेखिएको थियो–तपाईँलाई थाहा छ अहिले मन्दिर किन बन्द छन् ? किनकी भगवान अचेल सेतो कोट लगाएर अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् ।’
याे पनि पढ्नुस सुदूरपश्चिममा आज २७ जनामा कोरोना संक्रमण
‘तपाईँहरु सबै जीवनदायी बन्नु भएको छ । तपाईंहरू को कामका लागि म हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको अगाडि म नतमस्तक छु । तपाईंहरू हुनुहुँदैनथ्यो भने मानवता शायद हुँदैनथ्यो होला’, उनले अगाडि थपेका छन् ।
कोरोना संक्रमणपछि स्वास्थकर्मीको मनोबल उच्च बनाउदै अमिताभ बच्चनले भने – थाहा छ आजभोलि किन मन्दिरहरु बन्द छन ?
Posted by Abhishek Raj Singh on Saturday, July 11, 2020
अहिलेको समय केही कठीन र असहज रहे पनि संयुक्त प्रयासले यो अप्ठ्यारोलाई जित्न सकिने भन्दै उनले सबैसँग सचेत र आशावादी रहन आग्रह गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस नेपालका यी ७ जिल्ला भए ‘कोरोना फ्री’
अभिनेता अमिताभ र उनका छोरा अभिषेकलाई शनिबार राति कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
ट्याग्स: अमिताभ बच्चन, कोरोना भाइरस